प्रहरी र तस्करबीच गोली हानाहान, कम्तीमा २५ जना मृत्यु : RajdhaniDaily.com
Home विदेश प्रहरी र तस्करबीच गोली हानाहान, कम्तीमा २५ जना मृत्यु
प्रहरीका अनुसार गोली लागेर एक जना प्रहरी अधिकृतको ज्यान गएको छ । मृत्यु हुने अन्यहरुमा आपराधिक समूहका सदस्यहरु रहेको प्रहरीको भनाई छ । उक्त गोली हानाहानको घटना स्थानीय समय अनुसार बिहीबार बिहानै भएको थियो । प्रहरीले रियो दी जेनेरोको जाकारेजिन्हो नामको झुपडबस्तीमा लागूऔषधका तस्करहरु लुकेर बसेको भन्ने सूचनाका आधारमा भिषण कारबाही गरेको थियो । यसक्रममा ठूलो संख्यामा प्रहरीहरु आधुनिक हतियार सहित उक्त बस्तीमा पुगेका थिए । सामाजिक सञ्जालमा पोष्ट गरिएका दृश्यहरुमा झुपडबस्तीका धेरै ठाउँमा ग्यास बम बिस्फोट गरिएको र गोली चलेको आवाज सुनिएको छ ।
हेलिकप्टरबाट लिइएका तस्वीरहरुमा सशस्त्र तस्करहरु घरका छानाबाट भाग्दै गरेका देखिएका छन् । जाकारेजिन्हो झुपडबस्तीलाई रेड कमान्ड नाम गरेको आपराधिक समूहले आफ्नो अखडा बनाउँदै आएको थियो । रियो दी जेनेरोका अन्य झुपडबस्तीहरु पहाडी इलाकाहरुमा रहे पनि जाकारिन्हो बस्ती भने समथल ठाउँमा छ ।
प्रहरी र तस्करबीच
प्रदेश ५ एजेन्सी - December 20, 2020 0
Not-to-be-missed एजेन्सी - July 5, 2020 0
प्रदेश ५ एजेन्सी - November 11, 2020 0
कलंकीमा ट्रकले मिनीट्रकलाई ठक्कर दिँदा ३ को मृत्यु, १ जना घाइते
काठमाडौं । कलंकीको मकालु पेट्रोल पम्प अगाडि आज बिहान ट्रकले मिनीट्रकलाई ठक्कर दिँदा तीन जनाको मृत्यु भएको छ । बल्खुबाट सीतापाइलातर्फ गइरहेको बा ५ ख...
Breaking News एजेन्सी - March 1, 2020 0
कोरोना संक्रमणबाट गर्भवती उपमेयरको निधन
Editor-Picks राजधानी समाचारदाता - May 18, 2021 0
विराटनगर । कोरोना संक्रमणबाट सप्तरीको सप्तकोशी नगरपालिकाकी उपप्रमुख आशा चौधरीको निधन भएको छ । विराटनगरस्थित विराट नर्सिङहोममा उपचारका क्रममा आज उपप्रमुख चौधरीको मृत्यु भएको...
Breaking News एजेन्सी - July 25, 2020 0
epaper एजेन्सी - May 12, 2021 0